Tattaaffiin carraa hojii uumuu ittifufeera
Rakkoolee hawaasummaafi dinagdee dargaggootaa furuuf sochiin taasifamaa tureera. Dhiyeenya kana fundiin dargaggootaa qarshiin biliyoona kudhan mootummaa federaalaan akkasumas qarshiin biliyoona kudhan naannoleen, walumaagatti qarshii biliyoona digdamni ramadame dargaggoota hedduu fayyadamoo taasisaa jira.
Ta’us baay’ina dargaggoota hojii barbaadaniin yommuu wal bira qabamu ammayyuu hojii guddaatu hafa. Gama biraatiin ammoo fundiin ramadame kunuu haala walfakkaatuun hojiitti kan hiikame miti.
Torban darbe waltajjii Ministeerri Dargaggootaafi Ispoortii karoora bara 2010 dargaggootaaf carraa hojii uumuu ilaalchisee qophaa’erratti qaamolee dhimmi ilaalu hunda waliin mariin taasisee ture.
Ministirri muummee ittaanaan Mootummaa RFDI, Obbo Dammaqaa Mokonnon waltajjicharratti akka jedhanitti, mootummaan hojii dhabdummaa hir’isuuf yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannaan hojjetaa jira.
Haaluma kanaan bara darbe qofa dargaggoota miliyoonaan lakka’amaniif carraa hojii uumuun danda’ameera. Baranas dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuuf karoorri ba’e akka hojiirra ooluuf tumsi cimaan ni taasifama.
Ministirri Dargaggootaafi Ispoortii, Obbo Ristuu Yirdaawu gamasaaniin akka dubbatanitti, bara bajataa baranaatti dargaggoota hedduuf carraan hojii kan uumamu ta’a.
Haaluma karoora kanaatiin Oromiyaatti dargaggoota miliyoona tokkoof, naannoo Amaaraatti kuma 873f, Tigiraayitti kuma 248f akkasumas Finfinneetti dargaggoota kuma 16f carraan hojii kan uumamu ta’a. Naannoleen kunniin fakkeenyummaan eeraman malee naannolee hundaatti bifuma walfakkaatuun kan raawwatamu ta'a.
Akka karoora kanaatti carraan hojii uumamu kun kallattiin mindeessuufi gurmeessuufaa of keessaa qaba. Dargaggoota gurmaa’an kunneeniif bakka hojiifi haalli liqii ni mijataaf. Haaluma kanaan lafti hojii adda baafameera. Raawwiin kurmaana tokkoffaa yommuu ilaalamus kan nama jajjabeessuudha. Magaalaan Finfinnees sheedota 650 barana ijaaruuf karoorfatee sochiin taasisaa jiru haala gaariirra jira.
Haa ta’u malee, qorannaa raawwii hojii kurmaana tokkoffaarratti taasifameen hudhaalee hedduu adda baafamuunis kan dagatamu miti. Qindoominaan hojjechuu dhabuun, fayyadamummaa haqa qabeessa diriirsuu dhabuun, rakkoo bulchiinsa gaariifi humna raawwachiisaa muraasaan socho’uun hudhaalee sochii hoji dhabdummaa furuu danqan keessaa isaan muraasa.
Odeeffannoon hojii dhabdummaa ilaalchisee funaanamus qulqullina kan hinqabne ta’uun duula hojii uumuuf taasifamu gufachiisaa akka jiruudha kan himame.
Kana malees, akka hirmaattonni waltajjichaa tokko tokko dubbatanitti maallaqaafi bakka hojii dhiyeessuu qofti fala waan hintaaneef dhaabbilee maashinii liiziidhaan dhiyeessan babal’isuurratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha.
Dhaabbileen dargaggootni waldaan gurmaa’an keessatti sirni odiitii iftoomina qabu qixa sirriin diriiree waan hinjirreef diigamuu waldaalee baay’eef sababa ta’uun hubatamee irratti hojjetamu akka qabus ni hubachiisu. Eeyyama hojii kennuurrattis hojmaatni walxaxaan bal’inaan waan calaqqisuuf hundeerraa furamuu qabas jedhaniiru.
Obbo Dammaqaanis rakkoolee olitti eeraman kunneen kutannoon akka furan akkasumas hanqinaafi fooyya’iinsa jiru yeroo yerootti qorachuudhaan kallattii furmaataa akka kaa’aa deeman ibsu.
Walumaagalatti, bara bajataa baranaatti yeroo kamuu caalaa dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuuf sochii cimaan taasifamaa jira. Hanqinoota sadarkaan mul’atanis wal dubbisaniin waliin hojjechuun kan furamu ta’a. Haaluma kanaan baay’inni dargaggoo hojii dhabaa carraa hojii uumamu dursu kan furamu ta’a.
Torban kana/This_Week 17509
Guyyaa mara/All_Days 1442289